Zvirwere - Bezzia | Bezzia
Tinomirira kurwara kune zvese izvo shanduko zvinogadzirwa muhutano hwemunhu. Ichi chiitiko chinoshandura mamiriro edu epanyama uye chine mhedzisiro yakaipa pamiviri yedu. Nechikonzero ichi, kubva kuBezzia tinoda kukupa ruzivo nekukuyambira nezvemhando dzakasiyana dzezvirwere zviripo.
Naizvozvo, isu tinoteerera zvinokonzera izvi zvirwere, kunyangwe zvirimo muzviratidzo uye nemarapirwo anogona kuitika ekurapa. Nekudaro, hatizosimbise nzira yekurapa chirwere chete asiwo mikana iyo vanhu vanofanirwa kuzvidzivirira.
Tinokukurudzira kuti uverenge chikamu chedu chakatsaurirwa zvirwere y ita zvese zvinogoneka kuzvidzivirira kana kuvabata zvakanaka sezvazvinogona.
Anemia: zvimwe zviratidzo zvaunofanira kuziva
Ichokwadi kuti patinofunga nezveanemia tinoibatanidza nokuneta kana kuti kuneta. Asi chokwadi iwe unoziva kuti ...
Kwemamwe makore ikozvino, vanhu vane matambudziko ekuona vakakwanisa kuenda kune refractive kuvhiya kuti vagadzirise uye kubvisa…
Gastroesophageal reflux, ndezvipi zvekudya zvaunofanira kudzivisa
Gastroesophageal reflux chirwere chinokanganisa hurongwa hwekudya. Izvi zvinokanganisa mabatiro atinoita chikafu...
Chii chinonzi alopecia? Zviratidzo uye kurapwa
Vanhu vazhinji vane hanya nekudonha kwebvudzi kana alopecia, dambudziko rinobata vese varume uye…
Kushushikana kunokanganisa sei hutano hwemazino ako
Utano hwemazino ndechimwe chinonetsa zvikuru. Nekuti isu tinoda kuve nemazino ane hutano uye hongu,…
Chii chinonzi anemia? Zviratidzo uye kurapwa
Anemia chirwere chinowanzoitika chinowanzokonzerwa nekushaya iron muropa. Pasina…
Chii chinonzi irritable bowel syndrome?
kubudikidza Tony Torres inoita 4 mwedzi .
Irritable bowel syndrome ihosha yekugaya kudya kunonyanya kukanganisa ura hombe. Ndezve…
Nzira yekurapa cystitis nemishonga yechisikigo
Kurapa cystitis unogona kushandisa mishonga yemumba uye zvigadzirwa zvechisikigo zvinobatsira zvikuru. Dambudziko iri ...
Inoramba iripo Covid, inosanganisirei?
kubudikidza Tony Torres inoita 5 mwedzi .
Persistent Covid kana chisingaperi Covid syndrome chiitiko chitsva chakagadzirwa kubva…
Scalp psoriasis: zvikonzero, zviratidzo uye marapirwo
kubudikidza Miriam Guasch inoita 5 mwedzi .
Waona shanduko muganda remusoro wako here? Unogona kunge uri kusangana nechirwere cheganda chinozivikanwa…
Pahuro unorwadziwa here paunomedza? Ziva zvinogona kukonzera
kubudikidza Susana godoy inoita 5 mwedzi .
Kurwadziwa kwehuro kana kumedza kunogona kuve kwakajairika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Pasina kupokana, munhu wese…
Nzira yekurapa decalcification pameno?
Mhando dzakasiyana dzemaronda
Anonisi inopesana nekusangana mumhuno
Oral mbiriso hutachiona: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Chii chinonzi mamota?
Kurapa uye kurapwa kweBartholinitis
Ndeapi ma cysts ari mumazamu?
Zvinowanzokonzera marwadzo emukadzi